Ụbọchị: 11 November 2019
Turkey Akwa Speed ​​Train Stations; Mgbe mmejuputa iwu nke Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa na Ankara-İzmir High Speed ​​Railway Providence na ịgbanye ụkwụ nke ụgbọ oloko ahụ, YHT, nke dị oke mkpa dịka iwu ụgbọ okporo ígwè, [More ...]
Turkey Akwa Speed ​​na High-Speed ​​Railway Line na map; N'ime owuwu nke okporo ụzọ dị oke elu, a na-ekpebi ụzọ nke Istanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir na Ankara-Konya dị ka netwọkụ isi. 15 bụ onye kachasị ukwuu na mpaghara anyị dị elu [More ...]
Railway Bosphorus Tube Crossing na Gebze Halkalı Mmelite nke Usoro Ọhịa; Odikwa n'akụkụ Europe Halkalı mpaghara Gebze dị n'akụkụ Eshia jikọrọ onwe ya na usoro ụzọ ụgbọ oloko ọgbara ohuru na nke dị elu. [More ...]
Turkey Georgia na-ewu ụgbọ okporo-ewu; iji nye njikọ ọdụ ụgbọ oloko na-enweghị mgbochi n'etiti Turkey na Georgia, Azerbaijan na ndị Turkic Republic of Central Asia. [More ...]
Eskişehir setịpụrụ ihe atụ n'okporo ụzọ dị larịị; Obodo Eskişehir Metropolitan, nke bụ ihe atụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ọkachasị na-arụ ọrụ okporo ụzọ ya dị n'ime ime obodo, a ga-eme 13-14 2019 na Ankara n'etiti November 1. ihe [More ...]
EGO ahaziri X LineX ka EGO Express; Ankara Obodo Ankara, bụ nke etinyere mmejuputa ihe ohuru n'ụzọ iji bụrụ obodo-enyi nwere ụmụ akwụkwọ, [More ...]
Ogologo nke Akçaray Tram Line ruo Kilomita 20; Kocaeli Obodo ukwu gbatịrị Line Akçaray Tram n’agbata Bus Station na Sekapark Training Campus ruo Beach Street. Emecha nke ahịrị ohuru, 11 November [More ...]
Liberalization nke ilgbọ okporo andgbọ na Mweghachi nke TCDD; Mgbe etinyere okporo ụzọ nke mba ndị mepere emepe, a na-ahụ na agbanzigharị mpaghara ahụ dịka ọnọdụ na-agbanwe agbanwe. Ọga n’ihu mmepe nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè Turkey site n’inweta ọkụ ọkụ, site na njem gaa na ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè, [More ...]
Ihe nkiri 10 Nọvemba na ọdụ IETT; prọfesọ Kemmụ akwụkwọ Ali Kemal Yiğitoğlu Secondlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị kwụgburu foto Atatürk na ọdụ ụlọ ọrụ IETT na ncheta nke 10 November. prọfesọ Ali Kemal Yiğitoğlu ụmụ akwụkwọ praịmarị na sekọndrị [More ...]
Gosiputa site n’aka Onye isi ala Yavaş nye ụmụ akwụkwọ Mahadum Yıldırım Beyazıt; Mansur Yavaş, onye isi obodo nke Ankara Obodo ukwu, gbakwụnyere ozi ọma ọzọ banyere ụmụ akwụkwọ nke isi obodo ahụ. N'iburu n'uche mmefu ego nke ụmụ akwụkwọ na-amụ n'isi obodo [More ...]
Derevenk na-ejikọ na Hulusi Akar Boulevard; Mgbe Derevenk Viaduct nke etinyere ọrụ na ntinye nke Onye isi ala anyị Recep Tayyip Erdoğan na okporo ụzọ njikọ, a malitere ọrụ iji jikọọ viaduct ozugbo na Hulusi Akar Boulevard. Metropolitan [More ...]
Nleba ụgbọ ala Uludağ! ; Turkey si Uludag site cable ụgbọ ala ga-abụ ịdọ aka ná ntị bịara otu n'ime ihe ndị kasị mkpa oyi njem emmepe na ọdịdị. Cargbọ ala USB nke na-enye ụgbọ njem ọzọ n'etiti Bursa city center na Uludağ [More ...]
Enwere ụgbọ oloko dị elu n'etiti oru ngo 10 a ga-ewu na Bursa; Söze “You na-ekwusi ike na mmepe nke ụgbọ oloko na-efegharị, anyị na-agbasochi anya. Ka m nye gị ozi kacha ọhụrụ Na Satọde… [More ...]
Plajyolu Tram Line etinye n'ọrụ; N’izu gara aga, ụgbọala ule Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın's Education Campus A na-etinyere tram nke okporo ụzọ osimiri ahụ ruo taa. [More ...]